Ihe nzuzo zoro ezo nke Malta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Ihe nzuzo zoro ezo nke Malta
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Mmanụ olive Maltese © Malta Tourism Authority
N'etiti obodo Mediterenian, Malta guzobere onwe ya dika ebe mmanya di nma. Vintages ndị Malta adịghị ama ama maka ịmịpụta mmanya dị ka ndị agbata obi ya na Mediterenian kama ha karịrị ijide onwe ha na asọmpi mba ụwa, na-enweta ọtụtụ otuto na France, ,tali, na ndị ọzọ.
Mkpụrụ vaịn mba dị iche iche toro na Malta gụnyere Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Carignan, Chenin Blanc na Moscato. Varietiesmụ amaala dị iche iche gụnyere: Gellewza (ihe dị iche iche na-acha ọbara ọbara maka uhie na rosés) na Girgentina (maka ị wineụ mmanya na-acha ọcha), na-amịpụta ụfọdụ mmanya dị mma nke ahụ na ekpomeekpo.
Malta na agwaetiti nwanne ya nke Gozo, agwaetiti nke Oké Osimiri Mediterenian na anwụ na-acha na gburugburu afọ, na-eme ka ọ bụrụ ọnọdụ kachasị mma maka ịmịpụta mmanya pụrụ iche. Enweghi mmiri ozuzo na agwaetiti Maltese site na usoro ogbugba mmiri. Mkpụrụ vaịn ahụ toro na tannins pụrụ iche na usoro acid siri ike n'ihi ọkwa dị elu nke PH. Nke a na - acha ọcha na mmanya na - acha ọbara ọbara nke nwere ike ịka nká.
Akụkọ banyere ụmụ amaala Maltese White Olive
Site na 1530 rue 1798, mgbe ndi Knight nke Order of St. John jidere Malta, amara oliv ndi a dika perlina onye Malta (Maltese pel) gafee Europe. Osisi Bajada mere ka ogige nke ndị ọgaranya mara mma ma jiri mkpụrụ ha mee ihe n'otu n'ime usoro ntinye aka nke mba - oke bekee. A na-eji ha akpọrọ ihe n'akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ọbụna n'okpukpe.
Ọtụtụ oliv ndị Malta, dị ka bajada na bidni, fọrọ nke nta ka ọ funahụ mgbe ha tochara ọtụtụ puku afọ n'àgwàetiti ndị ahụ. N’afọ 2010, osisi ole ruru atọ. A kụrụ otu osisi oliv ọhụrụ 120 na Malta dị ka akụkụ nke atụmatụ nke Clọ Akwụkwọ Culinary Mediterranean na-emepụta mmanụ oliv sitere na mkpụrụ oliv naanị na Maltese Islands. A na - ahụ oliv 'Bidni', nke na-agbakwunye aha mmanụ mmanụ a rụpụtara naanị na Malta.
Ndị na-eme nchọnchọ ndị mụọ gbasara oliv na-acha ọcha na-ekwu na ụcha ya dị iche na-acha ọcha. Mmanụ sitere na mkpụrụ oliv na-acha ọcha yiri nke oliv ojii na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma ọ nwere obere oge ndụ n'ihi obere usoro nke antioxidants na-atọ ụtọ nke na-emekwa ka ọ bụrụ ihe nchekwa. N'ihi ya, ụtọ oliv ọcha na-atọ ụtọ.
Njegharị na ịnwale
Enwere ike ịhazi njegharị na tastings na wineries. Dabere na oge, njegharị na-ekpuchi arụmọrụ niile site na nke mbụ gbaa ụka ruo na usoro ịka nká. Ha gụnyekwara akụkọ ihe mere eme mmanya na akụkọ ihe mere eme na ohere ịnụrụ ụtọ na ịzụta ọtụtụ mkpụrụ vaịn. Mmanya-akatabi okop na ubi-vine njegharị na-ahazi site pụrụ iche obodo elekọta mmadụ dị ka Njem nlegharị anya Merill Eco.
Celsi Wine na Malta © Malta Tourism Authority
Meridiana dị na etiti Malta, ebe nchekwa mmanya ha dịkwa mita anọ n'okpuru oke osimiri.
Ha na-amịpụta mmanya tozuru etozu nke ụwa nke sitere na mmanya vaịn nke naanị ala Malta na-eto.
A na-ahazi njegharị Winery nke na-eso mmanya vaịn na otu n'ime mbara ala ahụ site na nhọpụta ma ọ bụ site na e-mail [email protected] ma ọ bụ site na ịkpọ ala na 356 21415301.
Ebe a na-edozi mmanya dị na ụlọ na-adaba na Order nke St. John, ụlọ karịrị gbọmgbọm osisi oak 220 nke eji eme agadi maka ị wineụ mmanya na-acha ọbara ọbara. Ala Marsovin na okpuru ulo bụ ihe akaebe nye mkpebi Marsovin na ọdịbendị mmanya.
Ebe nchekwa nke Marsovin na-anọchite anya ọgbọ anọ nke ndị na-eme mmanya na nka nke afọ 90.
Mmanya emeela agadi na gbọmgbọm mbubata nke French ma ọ bụ nke osisi oak nke America, nke na-enye ụdị agwa doro anya na ụdị mmanya na isi ya.
Kemgbe ihe karịrị afọ 100, Delicata ka bụ nke ezinụlọ na ezinụlọ Delicata.
Pọtụfoliyo nke pọtụfoliyo ejirila ihe karịrị otu narị afọ nke onyinye mba ụwa gụnyere ọla edo, ọlaọcha, na ọla nchara na Bordeaux, Burgundy, na London.
A na-enwe nnọkọ oriri na ọ byụ onlyụ naanị site na nhọpụta maka ndị na-ere mmanya na nri ndị na-ede akwụkwọ mmanya na mmanya.
ha Vine maka Wine Project malitere na 1994 iji gbaa ndi nwe ala ka ha tolite nkpuru nkpuru nke winery. Otu ndị ọkachamara nke Delicata enyerela ndị ọrụ ugbo aka ịkọ ọtụtụ narị ubi vaịn na Malta na Gozo na ọrụ a.
Obere winery na Gharb na agwaetiti Maltese, mana naanị otu na-amịpụta mmanya dị elu emere site na mkpụrụ vaịn etolitere na-ejighi ahịhịa.
A na-ahazi ihe omume na arịrịọ site na ntinye akwụkwọ ma na-ejedebe na otu dị n'etiti ndị 8 na mmadụ 18. A na-esiri nri niile na saịtị site n'aka onye isi nri na n'oge nri, onye na-eme mmanya na-eweta mmanya ọ bụla ma kọwaa otu kacha mma iji nwee ekele maka ha. Maka ozi ndị ọzọ, email [email protected]
Ala 'Ta Mena
Ala ahụ dị na ndagwurugwu Marsalforn mara mma n'etiti Victoria na Marsalforn Bay. Ọ gụnyere ubi mkpụrụ osisi, osisi oliv nwere ihe dịka osisi oliv 1500, osisi oroma, na hectare 10 nke ubi vaịn. Ọ na-enwe ọhụụ panoramic nke Gozo Citadel na ugwu na obodo ndị gbara ya gburugburu.
Na Ta 'Mena Estate ha na-ahazi ọrụ dị iche iche dịka ịgagharị na gburugburu ụlọ na-esochi mmanya na nri, nri ehihie na nri abalị, barbecues, nri, nri nri, mmemme ụbọchị zuru ezu, wdg. buru, ịkọ mmanya, ịpị mmanụ oliv na ndị ọzọ.
Ubi vaịn na Malta © Malta Tourism Authority